Set in la sii daayay ka dib sannadkan, Apple ee OS dambeeyay cusboonaysiiso El Capitan ee 10.11, hore ayaa guud ahaan wax badan oo xiiso online. Waxaa jira daro dhowr iyo casriyaynta in tani ay casriyayn OS cusub ku soo dejin doonaa in dadka isticmaala. Qaar ka mid ah waxaa ka mid ah;
• Mid ka mid ah casriyaynta ugu dareemi by El Capitan waa in Notes waxay noqonaysaa mid dheer. Waxa kale oo aad awood u yeelan doonaan in ay dadka dhexgalaan warbaahinta kale sida video iyo files audio galay qoraalada aad si fudud u isticmaalka galinta jiitaa-iyo-dhibic.
• El Capitan sidoo kale u ogolaataa in uu soo bandhigo kooxda barnaamijyadooda shootali oo dhinac marka hab shaashad buuxda. Of wax kale habkaani dhigaya bandhigay eegi ka badan qabow. Sidoo kale waa hab sahlan oo multi-hawleed.
• Isticmaalka gacanta howlgalka ayaa noqday arrin fudud. El Capitan ayaa kor u habkaani adigoo kuu oggolaadaan in aad si aad u aragto wax walba ee lakabka hal dheeri ah hagaajinta maamulka desktop MAC.
• El Capitan ayaa sidoo kale soo hagaagtey raadinta Spotlight meel kasta awood ugu horeysay in la soo bandhigay by Yosemite ah. Tusaale ahaan, haatan natiijooyinka goobaha sida vimeo iyo YouTube aad ka heli karto.
• Tani update OS cusub ayaa sidoo kale soo hagaagtey Safari kuu oggolaadaan in aad wareemo goobaha si fudud si looga fogaado iyaga is dhex jira malaayiin goobood oo kale laga badiyay. Sidoo kale walxood ee Safari muuqan in midabka iyo sii sidaas xitaa marka aad dib-u-billowno browser.
• El Capitan ayaa intaa ku daray aragtida Transit ah in Maps oo kuu ogolaanaya in aad si aad u hesho tilmaan uga hesho meel kasta oo aad u socoto.
Mac OS X El Capitan 10.11 vs. Yosemite 10,10
Bal aynu eegno sida ay labadaan is barbar dhinac.
The New kala hab View ka dhigaysa duruufaha kala duwan ka fiican. Waxaa hadda fududahay in si dhaqso ah daaqadaha bidix ama midig.
Isticmaalayaasha ayaa la oggol yahay in lagu dhigo kooxda laba daaqadaha dhinac laakiin macquul ma ahan inay si dhaqso ah daaqadaha.
El Capitan kaa caawin doona inaad hesho dulqabo on Mac ah haddii ay meel qarsoon. El Capitan ka dhigi doonaa dulqabo weyn mar walba oo aad u lumin.
Yosemite si fudud ma aha in habkaani. Iyadoo Yosemite, waxaad u baahan doontaa si aad u ogaato dulqabo oo dhan keligaa.
El Capitan baabi'iyo kuwa Cajalado aad looga xumaado in arbushin-korkiisa Safari sababtoo ah uqaadineed AirPlay ay
Yosemite sameeyey Safari fiican laakiin Cajalado dhibsado aan la hareen aan ku dhow tab ah.
El Capitan ayaa ka hartay aruuray la cusub iyo in la hagaajiyo Control Mission in aad u ogolaanaya in ay multi-hawl adoon ka leexanayn qadka waxa aad ka shaqeeya.
Yosemite ka dhigi kartaa muujinta badan desktop in OS X waxa uu siiyaa xubnaha.
El Capitan ayaa ku daray qaababka dheeraad ah oo toosh. Waxaad ka heli kartaa cimilada, Dhibcaha ciyaaraha, jadwallada iyo macluumaad kale.
Barta bartamaha shaqaysaa isla ganaax ku Yosemite, laakiin dhan waxaad ka heli xiran yihiin web baaritaan.
Waxaad sawiri kartaa, sawir iyo xitaa ku dar photos in qoraalkaaga oo waafajinta la aaladaha kale ee macruufka aad.
Notes on Yosemite kuwo sahlan oo aysan jirin meel aad u badan si ay u sameeyaan wax badan.
Apple Maps siinayaa tilmaamaha aad isticmaalaya feature Transit ah
No tilmaamaha on Apple Maps.
Waa kuwee Macs la jaanqaadaan El Capitan 10.1?
Haddii El Capitan aad yididiila iyo aad u yaabsan oo MACs la jaanqaadaan OS cusub, ha ka welwelin. Ku dhowaad dhammaan MACs xitaa kuwa 8-sano jir ah si raaxo leh ku qaadi kartaa El Capitan 10.1. Halkan liiska lagu daydo in la jaanqaadaan El Capitan.
• iMac sii daayay bartamihii 2007-ama cusub
• 13inch MacBook sii daayay dabayaaqadii 2008 ama 2009
• MacBook Pro 13 inch sii daayay bartamihii 2009 ama ka cusub
• MacBook Pro 15 inch sii daayay dabayaaqadii 2007 ama ka cusub
• MacBook pro 17 inch 2007or goor dambe sii daayay cusub
• MacBook Air sii daayay dabayaaqadii 2008 ama ka cusub
• Mac Mini sii daayay hore 2009 ama ka cusub
• Mac Pro sii daayay horraantii 2008 ama ka cusub
• Xserve sii daayay hore 2009 ama ka cusub
Hadda oo aad ogtahay Mac taageertaa El Capitan iyo siisay oo dhan ee casriyaynta iyo faa'iidadiisa, aad kor u qaadi doona si cusub MAC OS?
Noo soo sheeg markii aad u cusboonaynta iyo haddii aad u malaynaysid inay isbeddel ah in aad waayo-aragnimo MAC.
> Resource > Mac > Apple Mac OS X El Capitan 10.11 vs. MAC OS X Yosemite 10,10